के तपाईं प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ वा आफ्ना पाठकहरूलाई निरुत्साहित गर्नुहुन्छ? | Martech Zone
मंगलवार, मार्च 20, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
आज राती मैले बोर्डरहरूबाट ईमेल प्राप्त गरें। एक शिक्षकले तपाईंको जीवन कसरी परिवर्तन गर्‍यो भन्ने बारेमा लेख्नको लागि त्यहाँ भेला हुने प्रतिस्पर्धा छ।
भर्खरको ब्लग पोष्टिlog ब्लगरको ब्रायन क्लार्कबाट पोष्टिंग मेरो प्रेरणा हो, Gram व्याकरणात्मक त्रुटिहरू जसले तपाईंलाई लाटो देखिन्छ। ब्रायनले २ हप्ता पहिले पोष्ट लेखेका थिए, तर यो त्यस बेलादेखि मसँग सताएको छ। म व्याकरण र हिज्जेसँग लगातार संघर्ष गर्दछु।
प्रतियोगिताको बारेमा: के तपाइँ त्यस्तो शिक्षकलाई चिन्नुहुन्छ जसले फरक बनायो? किनाराहरू र गेदरहरू तपाईंको कथा सुन्न चाहन्छन् ताकि हामी यसलाई अरूसँग बाँड्न सक्दछौं र शिक्षकहरूले प्रत्येक दिन गर्नुहुने अद्भुत कार्यको उत्सव मनाउँदछन्। सीमाहरूले final $० किनारी गिफ्ट कार्ड प्राप्त गर्न चार फाइनलिस्टहरू चयन गर्नेछन् र एक भाग्यशाली विजेतालाई $ २ .० किनारा उपहार कार्ड प्राप्त गर्न।
दिनको क्रममा मैले के पढेको, सिकेका र हासिल गरेको कुरा प्रतिबिम्बित गर्दछु। मेरो ड्राइभ होममा, म सामान्यतया ती विचारहरू मेरो टाउकोमा स collecting्कलन गर्दैछु र मेरो ब्लगमा लेख्नको लागि व्यवस्थित गर्दैछु। मैले वास्तवमै लेख्नको लागि बसी समय, सामग्री विस्फोट गर्न को लागी तयार छ। म 'चेतनाको धारा' मा लेख्न रुचाउँछु। म पर्याप्त छिटो टाइप गर्न सक्दिन ... त्यसैले मेरा वाक्यहरू र अनुच्छेदहरू अनैतिक हुन्छन् र वरिपरि उफ्रन्छन्।
सधैं, म केहि गल्तीहरू छोडिदिन्छु। म पोष्ट ड्राफ्टको रूपमा सुरक्षित गर्छु। म ड्राफ्ट पढ्छु। म ड्राफ्ट प्रूफ - पढ्छु। म गल्तीहरू ठीक गर्दछु र ड्राफ्ट फेरि र फेरि प्रकाशित गर्छु। अन्तमा, म पोष्ट प्रकाशित गर्दछु र फेरि प्रमाण दिन्छु। जहाँसम्म म धेरै ध्यान दिन्छु, म अझै ती मध्ये एउटा गल्ती छाडिदिन्छु कि 'मलाई लाटो देख्छु'।
तर यसले मलाई लेख्नबाट रोक्दैन। म यो दिन अस्वीकार गर्छु।
भेला परियोजनाले मलाई मेरो 8th औं कक्षाको अंग्रेजी शिक्षक श्रीमती राय-केलीको बारेमा लेख्न प्रेरित गर्यो। यदि तपाईंले पोष्ट पढ्नको लागि एक वा दुई मिनेट लिनुभएन भने म तपाईंलाई भर्न दिनेछु। मेरो जीवनको त्यो क्षणमा म आफैंलाई पूर्ण रूपमा अनिश्चित थिएँ र मलाई कसैलाई सम्मान दिनको लागि मलाई कारण दिन कसैलाई असाध्यै आवश्यक परेको थियो। ।
मेरो डरलाग्दो लेखन, हिज्जे र व्याकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा, श्रीमती राय-केलीले खराबको भन्दा राम्रो के हो भनेर पत्ता लगाउन मेरो काम खोज्छिन्। सकारात्मकमा ध्यान केन्द्रित गरेर, म श्रीमती राय-केलीको लागि ठूलो काम सिक्न र उत्पादन गर्न चाहान्छु। म विगतमा गरेका गल्तीहरूका लागि मेरो कामको समीक्षा गर्नेछु र तिनीहरूलाई फेरि नदिनको लागि हर प्रयास गर्नेछु।
श्रीमती राय-केली आफ्ना विद्यार्थीहरूमा कसरी प्रोत्साहित गर्ने र आत्मसम्मान बढाउने जान्छिन्। दुबै शिक्षक र नेताहरू दुवैको लागि यो दिन र उमेरमा दुर्लभ छ। मलाई थाहा छ ब्रायनले 'मलाई लाटो देखिदिन' भन्ने पोष्ट लेख्दैन तर यो निश्चित छ (र अझै पनि गर्छ) मलाई सताउँदछ। मेरो लागि तपाइँलाई आशा छ कि ब्लगिंगका बारे सोच्दै छन् वा ब्लगिंग गर्दै छन् कि यो जस्तो लेखले तपाईंलाई निरुत्साहित गर्दैन।
NOTE: ब्रायनको ब्लग नेट मा एक उत्तम हो। यो एक उत्कृष्ट स्रोत हो र यसले मलाई मेरो लेखन र प्रतिलिपि लेखन सीप सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। यो एक खुशीको र सकारात्मक ब्लग हो र लेखकहरूलाई निरुत्साहित गर्न कहिल्यै प्रयोग हुने छैन ... एकदम विपरित सत्य हो!
म सबै ब्लगरको लागि बोल्न सक्दिन, तर म तपाईंको गल्तीका लागि क्षमा दिनेछु र आशा गर्दछु कि तपाईंले मेरो लागि मलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। मँ तपाईको ब्लग पढिरहेको छैन किनकि म तपाईको त्रुटिहरू पत्ता लगाउन कोशिस गर्दैछु - म यसलाई पढ्दै छु किनकि म तपाईंबाट सिक्दै छु वा तपाईंको लेखको आनन्द लिइरहेको छु। उही समयमा, म आशा गर्दछु कि तपाईंले मेरो सम्पर्क फारममा भर्न समय लिनुहुनेछ यदि "म गूंगा देखिन्छु"। म कहिले निराश हुने छैन ... मेरा पाठकहरूले मलाई ईमेलमा तीन पटक बुझाउनुपर्‍यो जब मैले सल्लाहको सट्टा सल्लाह लेखें (एरग!)।
मलाई विश्वास छ कि मेरो व्याकरण र हिज्जे कौशल सुधार हुँदैछ। मैले बुझें कि केहि पाठकहरूका लागि ती जस्तो गल्तीहरूले मेरो विश्वसनीयता र प्रतिष्ठालाई चोट पुर्‍याउँछ त्यसैले म तिनीहरूलाई सुधार गर्न कडा मेहनत गर्दैछु। आशा छ, तपाईंले मलाई केही ढिलो काट्नु भयो र सन्देशमा फोकस गर्नुभयो गल्तीहरू होइन!
राम्रो शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सुधार गर्छन्, ठूला विद्यार्थीहरूले तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्छन्। तपाईं प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ नेता, कोच, पुजारी, अभिभावक वा ब्लगर को स्थानमा शिक्षक र यो सत्य हो।
के यो हिलारी क्लिन्टनको अन्त्य हो?
मार्क्स 20, 2007 मा 7: 27 PM
म यसलाई "कडा प्रेम" डगको रूपमा लेख्न सक्दछु, तर वास्तवमा, हेडलाइनमा "गूंगा" को प्रयोग केवल खींचने शक्ति बढाउनको लागि थियो। बाहिरबाट जान्छ कि मैले लेखेको सब भन्दा लोकप्रिय पोष्ट हो, जुन एकदम आघात थियो।
आशा छ कि त्यहाँ कुनै कडा भावनाहरु छन्। 🙂
मार्क्स 20, 2007 मा 8: 01 PM
म तिमीलाई कति पटक भन्न सक्दिन पुनः लेख्नुहोस् यो पोष्ट ताकि यो त्यस्तो आवाज नहोस्! तपाईंको ब्लग जानकारी र प्रेरणा को एक महान स्रोत भएको छ। मलाई थाहा छ तपाईले त्यस्तो भन्न खोज्नु भएको थिएन - म केवल संवेदनशील छु किनकि म 'व्याकरणको रूपमा चुनौती दिएँ'। 🙂
हतोत्साहित गर्नु भन्दा तपाईको ब्लग मेरो लागि ठूलो प्रोत्साहन भएको छ (र म निश्चित छु कि अरु धेरै मानिसहरु)। शब्द 'गूंगा' बस यो म पढे पछि म संग अडियो र म यो जान चाहन्न।
साथै, मैले धेरै टिप्पणीहरू याद गरेको छु (मैले सदस्यता लिएको छु) र यति धेरै टिप्पणीकर्ताहरू सीधा मतलब हुन्! तपाईंको पोष्टले धेरै मानिसहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछ (यसले मलाई मद्दत गर्‍यो)। मलाई आशा छ कि टिप्पणीकारहरूले कसैलाई पनि लेख्न निरुत्साहित गर्दैनन्। यो अभ्यास र धैर्यता आफैमा लिन्छ!
पोष्ट जाँच गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद! सबै प्रोत्साहन को लागी धन्यवाद।
मार्स 21, 2007 मा 12: 27 एएम
मलाई लाग्छ कि यो उनीहरूका गल्तीहरूको बारेमा मानिसहरूलाई सम्झाउने एक राम्रो तरिका थियो। यो निश्चित छ कि बोल्न को लागी कठोर लाग्छ तर यो शायद मान्छे ध्यान को बाटो हो। यो पक्कै पनि उहाँको शिक्षण तरिका थियो।
मार्स 21, 2007 मा 6: 57 एएम
म सहमत छु, होवे। यसले मलाई मद्दत गरेको छ र यो एक उत्कृष्ट पोस्ट थियो। विडम्बनाको कुरा, म आशा गर्दछु कि यसले पोष्टहरू लेख्नबाट मान्छेहरूलाई निरुत्साहित गर्दैन। मेरो कुरा ब्रायनमा शट लिनु थिएन (म वास्तवमै उसको ब्लगलाई माया गर्छु)। मेरो कुरा भनेको यो सुनिश्चित गर्नको लागि कि हामी एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिइरहेका छौं।
म पक्कै चाहन्न कि मान्छे ब्लगिंगबाट अलग रहन यदि तिनीहरूले राम्रोसँग लेख्न सक्दैनन् भने। ब्लगिंगको बारेमा अचम्मको कुरा यो हो कि मानिसहरूले उनीहरूलाई के लेख्छन् भनेर लेख्छन्। कहिलेकाँहि व्याकरण र हिज्जे श्रेणीमा हुँदैन ... तर विकास, प्यारेन्टि,, विश्वास, इत्यादि जस्ता चीजहरू हुन् र साझेदारी गरिनुपर्दछ!
तपाईंको टिप्पणीको लागि धन्यवाद!
मार्स 21, 2007 मा 10: 17 एएम
जब तपाईले मेरो ब्लगमा विषयवस्तु थप्दा मेरो दिमागमा हराएको महसुस भयो मैले तपाईलाई जे महसुस भयो त्यसको वर्णन गर्नुहोस्। र मलाई लाग्छ ब्लग रिडरले व्याकरण र हिज्जेको बारेमा धेरै मतलब गर्दैन, महत्त्वपूर्ण यसको सामग्री हो।
ब्लगि aboutको बारेमा राम्रो कुरा भनेको तपाईले आफ्नो लेखन कौशल वृद्धि गर्नु हुनुहुनेछ, हुलाक पछि तपाईले अनुभव प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नै गल्तीहरू चिन्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी मानिस जो देशबाट आउँदछन् जुन अंग्रेजीलाई १ भाषाको रूपमा मान्दैन।
मार्क्स 21, 2007 मा 1: 09 PM
तपाईंको उदाहरण सायद सब भन्दा राम्रो उदाहरण हो - मैले अंग्रेजी को दोस्रो भाषा भएको मानिसहरुको बारेमा सोचेको पनि थिइनँ! इन्टरनेटको भाषा सीमाना छैन र हामीले बिल्कुलै समर्थन गर्न र हाम्रा ब्लगरहरूको कदर गर्नुपर्छ जुन अझ पनि अंग्रेजी मास्टर गर्न काम गरिरहेका छन्।
टिप्पणीका लागि धन्यबाद! र तपाइँको ब्लग मा महान काम।
मार्स 22, 2007 मा 12: 08 एएम
मँ सहमत छु कि सामग्री अधिक महत्वपूर्ण छ तर हामी यो तथ्यबाट उम्कन सक्दैनौं कि केहि पाठकहरु मात्र लेखकहरु लाई लेखेको बारेमा चिन्तित छन्। वा हुनसक्छ, उनीहरू सोच्दछन् कि लेख लेख्न सक्षम हुनुको मतलब नै तपाईं एक राम्रो लेखक हुनुहुन्छ। र त्यसबाट सहि हिज्जे र व्याकरण।
जनवरी 7, 2009 मा 5: 44 एएम
जब यो ब्लग पोष्ट र लेख को बारे मा छ, व्याकरणात्मक
त्रुटिले * गर्दैन * तपाईंलाई लाटो देखिने बनाउँदछ किनकि तपाईंको मतलब
गडबड हुन्छ! (तपाईको सल्लाह VS सल्लाह केस जस्तो)
तर म सँधै सामग्री हेर्ने गर्छु ... जुन हो
गाह्रो छ किनकि म आफूलाई एक प्रुफरीडरको रूपमा लाग्छ
जे होस् म प्रमाणित छैन
यो एक फरक संसार हो जब यो सामानको कुरा आउँदछ
तिर्नुहोस् यद्यपि! यदि यो नि: शुल्क सामग्री, मेह, व्याकरण र
हिज्जे गल्तीहरू सबै ठाउँमा छन्।
आफैलाई नराम्रो नराख्नुहोस् =) कोही पनि सिद्ध हुँदैन (र होईन)
एक हुनेछ :))